बेर जाम - परम्परागत र धेरै रिच नुस्खा | ThermoRecines
यो तयारी गर्नुहोस् स्वादिष्ट जाम प्लम एक वार्षिक घटना बनिरहेछ जुन मेरो क्यालेन्डरमा छुटेन।
जुलाई को अन्त्यमा, हामी जहिले पनि स collect्कलन गर्दछौं स्वादिष्ट प्लम त्यो हाम्रो स्कूल रूख छ। यस वर्ष, यसबाहेक, हाम्रा बच्चाहरू र केही स्कुलका बच्चाहरूले स collection्कलनमा सहयोग गरेजस्तै मजाको कुरा थियो, जसले मलाई रूखको माथिबाट फ्याँक्न चिच्याए: बढी प्लम !!!
त्यसो भए, यस्तो प्राकृतिक उत्पादको साथ, तपाईंले स्वादिलो ​​बेर जाम बनाउन सक्नुहुन्न। यो उत्तम तरीका हो यो फलको आनन्द लिनको लागि वर्षभरि।
र पक्कै पनि, मेरो परिवारका सदस्यहरूलाई एउटा सानो नमूनाको डेलिभरी, ताकि उनीहरू सके यसको स्वादमा रमाउनुहोस्।
1 बेर जाम
सबै वर्ष भर प्लमहरूको मजा लिने एउटा स्वादिष्ट तरीका।
G०० ग्राम पहेंलो बेर
१ लिंबू खुली
हामी प्लमको बोक्रा ताउँदछौं, म सामान्यतया तिनीहरू मध्ये कुनैमा छाला छाडिदिन्छु, हड्डीहरू हटाउँछु र गिलासमा राख्छु।
खुलेको निम्ती जोड्नुहोस् र क्रश गर्नुहोस् १ seconds सेकेन्ड, प्रगतिशील गति--15-१०।
हामी चिनी र कार्यक्रम थप्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २। हामी बेकर हटाउँछौं र बाष्पीकरणलाई वाष्पीकरण बढाउन टोकरी राख्छौं।
अन्तमा हामी जाँच गर्दछौं कि स्थिरता थोरै बाक्लो छ, यदि होईन भने, हामी केहि मिनेटहरू राख्छौं, तर हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि चिसो हुँदा यो केहि अलि बढी मोटा हुनेछ।
हामीले यसलाई केही गिलासका भाडाहरूमा राख्दछौं र तिनीहरूलाई प्याक गर्न पूर्ण रूपमा यसलाई सुन्दर बनाउँछौं।
यद्यपि पुस्तकहरूले सामान्यतया गति २ लाई सिफारिस गर्दछन्, हामी छिटो फुट्नबाट जोगिन केहि अलि बढी गति सेट गर्न चाहान्छौं, यो चाँडै वाफ हुन्छ र राम्रोसँग गाढा हुन्छ।
थप जानकारी - बेर जाम केक
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, १ घण्टा भन्दा कम, जाम र संरक्षण, Postres
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » Celiac » बेर जाम
म यसमा नयाँ हुँ, तपाईको नुस्खाका लागि तपाईलाई धेरै धन्यवाद, बेर जाम, म यसलाई लामो समयदेखि खोज्न कोशिस गर्दैछु र आज अन्त्यमा मैले यसलाई फेला पारे। सुरुमा यो एकदम तरल बाहिर आयो, जबसम्म यस तर्कले मेरो लागि काम गर्दिन र धेरै पढिसके पछि मैले पत्ता लगाए कि छालामा धेरै पेक्टिन छ, यसले यसलाई अधिक गाढा बनाउँदछ। तपाईले राख्नु भएको चिनीको मात्राले मलाई के आश्चर्यचकित गर्छ, के उनीहरूले चिनी संरक्षणको लागि हो कि गर्दैनन? तपाईको सल्लाहका लागि धेरै धन्यबाद र म आशा गर्दछु कि तपाईले मेरो इ-मेलमा जवाफ दिनुहुनेछ। चुम्बनहरू
नमस्ते मर्चे, चिनी जामको आवश्यक मिठास दिनको लागि हो र यसले मोटोपनको रूपमा कार्य गर्दछ। सबै जाम चिनीको साथ फल पकाएर बनाईन्छ जब सम्म तिनीहरू जामको ठीक मात्र मात्रा प्राप्त गर्दछन्। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। शुभकामना।
त्यसोभए एलेनाले पिल गर्नु पर्छ कि हुँदैन ... मैले भर्खर पढें कि मेचे एकदम तरल छ ... तपाईले मलाई भन्नुहुनेछ ... चुम्बनहरू।
नुरिया, म सामान्यतया छाला हटाउँछु र यदि अन्तमा तपाईं केही तरल पदार्थ देख्नुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई बीकर बिना केही थप मिनेटहरूको लागि राख्न सक्नुहुन्छ।
कुनै शंका ... g००gr हड्डी संग छ? के यो रातो बेर पनि हो? के यो चिनीको समान रकम हुनेछ? भ्याकुम प्याक भयो यो कति लामो हुन्छ? तिनीहरू कि हामी फ्रिज मा राख्न छैन? मैले पहिले नै तपाईंलाई अधिक काम दिएका छु ... धन्यवाद
मिरियनलाई जवाफ दिनुहोस्
प्लमको गहिरो तौल गरिन्छ। यदि तपाइँ रातो बेरको साथ गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै समस्या छैन र चिनीको मात्रा समान छ। भ्याक्यूम प्याक गरिएको यो तपाइँलाई6महिनासम्म नखोलेसम्म रहन सक्छ र यसलाई फ्रिजमा राख्नुपर्दैन तर यदि तपाईंले यसलाई खोल्नुभयो भने तपाईंले फ्रिजमा राख्नुपर्नेछ र केही महिनासम्म रहनेछ।
मैले बेरको जाम बनाएको छु र मलाई यो धेरै मनपर्‍यो, तर म यो जान्न चाहान्छु कि यो कति लामो हुन्छ जब यो एक पटक बिना प्याक गरीएको प्यालामा, एक गिलासको भाँडोमा? के तपाईंले पानी नुहाउने ठाउँमा जानुहुन्छ? तपाईंको मतलब के हो? तिमी खाली भन्छौ?
जब तपाईं तातो जामले जारहरू भर्नुहुन्छ, तपाईं यसलाई हर्मेटिक रूपमा बन्द गर्नुहुन्छ र यसलाई २ down घण्टा सम्म माथि तल राख्नुहुन्छ र यसरी भ्याकुम बनेको हुन्छ र यो लगभग for महिना सम्म बन्द हुन्छ र कम्तीमा केही जोडीको लागि फ्रिजमा खोल्दछ। उनीहरु।
एम। जोस भन्यो
मैले भर्खरै मात्र तपाईको नुस्खाको साथ बनेको प्लम जाम देखेँ र मैले पत्ता लगाए कि यो विन्डो पेस्ट जस्तो देखिन्छ: खण्डमा यसलाई कसरी अलि हल्का बनाउन सकिन्छ?
तपाइँको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद यो सबै थोरै सजिलो बनाउँछ
M.José लाई जवाफ दिनुहोस्
पानी थप्नुहोस् र यसलाई अधिक तरल नभएसम्म केही मिनेट राख्नुहोस्।
तर के यो शीत अघि वा पछिको भयो?
जाम स्वादिष्ट थियो !!! मैले एघार वर्षको उमेरको साथ मेरी आमालाई प्रभावित गरें, जो अफिसमा थिइन !!! धन्यबाद
नमस्ते सोफिया, मलाई लाग्छ तपाईको मतलब यो हो कि यो मोटो छैन, हैन? तपाईंले यसलाई सुन्नु अघि यो गर्नु पर्छ। तपाईको आमालाई प्रभावित गरेकोमा बधाई छ! निश्चय यो १० भन्दा बाहिर आएको छ हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा र हामीलाई टिप्पणी छोड्नु भएकोमा धन्यवाद।
मारिबेल एसएम भन्यो
कुनै अपराध छैन, "एम्बासर" लाई "प्याकेजिङ" ("कन्टेनर" बाट) द्वारा सच्याउनुपर्छ, किनकि यो नुस्खा पढ्दा धेरै कुरूप हुन्छ। र अब हामी जाम संग जान्छौं ...। शुभकामना।
Maribel SM लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै मारीबेललाई धन्यबाद। हामीले यसलाई पहिले नै सुधार गरिसकेका छौं।
तपाइँ हामीलाई भन्नुहुनेछ कि त्यो जाम तपाईलाई कस्तो लाग्छ 😉
सुधार गरिएको मारीबेल !!
कहिलेकाँही हामी हाम्रो औंलाहरू हराउँछौं ... र हाम्रो टाउको! 😉
अब तिनीहरूले थाहा पाउनेछन् भन्यो
म यो जाम बनाउन को लागी अगाडि छु। तिनीहरूले मलाई २ किलोग्राम दिएका छन्। क्लाउडिया प्लम, केहि हरियाली र अरू अधिक पाकेको। चिनी को मात्रा समान छ। के म पाकेको व्यक्तिलाई हरियोसँग मिसाउन सक्छु?
साब्रान ओरालाई जवाफ दिनुहोस्
हो, तपाईं पाकेको मानिसलाई हरियोलाई मिसाउन सक्नुहुन्छ। र तपाइँ चिनीको मात्रा थोरै परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ (यदि तपाइँ उनीहरूलाई धेरै मीठो लाग्छ भने, चिनी थप्नुहोस्, जुन धेरै धनी हुनेछ र तपाइँ कम क्यालोरीको साथ एक जाम पाउनुहुनेछ।
नमस्कार, भोलि म तपाईंको नुस्खा बनाउने छु, तर मसँग एउटा प्रश्न छ र यो यो नुस्खामा तपाईं भन्नुहुन्छ कि तपाईंले जामलाई भाँडो भित्रै चिसो राख्न दिनुपर्दछ, र टिप्पणीमा तपाईंले भन्नुभएको छ कि तपाईंले तिनीहरूलाई तातोसँग बन्द गर्नुपर्नेछ। जाम ... के ती बिभिन्न चीजहरूको लागि हुनेछ? धन्यवाद!!!!!!
जाम जोगाउन यसलाई थर्मोमिक्स गिलासबाट सीधै खन्याउनु आवश्यक छ, मतलब यो कि बरदानमा धेरै तातो छ, माथिको भागमा भर्नुहोस्, राम्रोसँग बन्द गर्नुहोस्, उल्टो राख्नुहोस् र यसलाई चिसो हुन दिनुहोस्। त्यसोभए तपाईंसँग केही खाली प्याक्ड जारहरू हुनेछन् जुन तपाईंलाई महीनों सम्म रहनेछ
नमस्कार, मैले गरेँ, जस्तो कि रेसिपीले भनेको छ र यो जलिरहेको छ, केहि थोरै, शीशामा।
एउटा जसको मैले फाइदा लिनका लागि व्यवस्थापन गरेको छु, यो प्रयोग गर्न असम्भव छ, यो क्विन्सहरू भन्दा कडा थियो। कसैलाई थाहा छ, किन यो जलाइएको छ र किन प्रयोग गर्न असम्भव छ?
कस्तो आपत्तिजनक छ कि यो तपाईंलाई फिट गर्दैन ... 🙁
यो केवल मलाई मात्र देखा पर्दछ कि यो प्रयोग गरिएको बेरको विविधताको कारणले भयो ... अर्कोको लागि, कम समय तालिका बनाउनुहोस् र मिनेटहरू बढाउनुहोस् जबसम्म तपाईं आफूले मनपराउनु भएको मोटाई प्राप्त गर्नुहुन्न।
यदि यो लिडल किचन रोबोट हो भने, यो थर्मोमिक्सको साथ उस्तै तयार छ?
सान मार्कोस केक टोस्टेड अण्डाको पहेंलो साथ